Umkhuleko weJaji Elilungile. ? Original Catholic futhi for Man
8 Kufundwa iMin
Umkhuleko kuMahluleli Olungileyo Yiyo ebhekiswe kwiNkosi uJesu Kristu kuphela umahluleli wethu phambi kukaNkulunkulu uBaba.
Kubalulekile ukwazi ukuthi imikhuleko kumele yenziwe ngokukholwa.
Izwi leNkosi lisifundisa ukuthi uma simfuna kumele sikholwe ukuthi uzosilalela ukusilalela futhi le yimfihlo yakho konke lokhu, ukuthi sikholwe.
Ngaphandle kokholo imithandazo zingamagama angenalutho nje angafinyeleli kunoma iyiphi ubuciko futhi angazifezi izinhloso enzelwe zona.
Kukho konke lokhu kuyadingeka ukwazi ukuthi yiziphi izizathu eziphambili eziholela ekutheni sithandaze, abantu abaningi babuza ijaji elilungile kuphela kepha hhayi ngokusuka enhliziyweni bese umthandazo uphelelwa ngamandla.
1 Uyini uMkhuleko Wejaji Olungile?
1.1 Umkhuleko wejaji lasekuqaleni lamaKatolika
1.2 Umkhuleko kumahluleli olungile wabantu
1.3 Umkhuleko ungahlulela ukukhipha isiboshwa
1.4 Umkhuleko wejaji elilungile ngamacala anzima
2 Ngingayisebenzisa nini imithandazo?
Uyini uMkhuleko Wejaji Olungile?
UMnu. UJesu Kristu Ungumngane wethu, umfowethu kanye neJaji yethu eyiJaji.
Ucelwa izinto eziningi futhi esinye sezicelo ezivame kakhulu ukuvikela thina nemindeni yethu.
AmaKhristu amanengi athandaza lomkhuleko nsukuzonke futhi lokhu kumele kube njalo ngoba zonke izinsuku ububi buyabheda futhi kuhle ukuhlala ekhaya nokuvikelwa kweJaji Elifanele cishe ngamunye wethu.
Lona ngumkhuleko owenziwa ngokusuka enhliziyweni selokhu sibeka ezandleni zakho into esiseduzane kakhulu okuhlala kuyizingane zethu nomndeni uwonke.
Yenza lo mkhuleko ngaphambi kokuqala uhambo lwansuku zonke, nawo wonke umndeni esidlweni sasekuseni Kungumqondo omuhle kakhulu ngoba nathi sigqugquzela umkhuba wobumbano emndenini futhi sifeza okushiwo yizwi le-Die soque uma ababili noma abathathu bevuma futhi becela uBaba ngegama likaJesu ukuthi uzonikeza yini izicelo ezivela ezulwini.
Umkhuleko wejaji lasekuqaleni lamaKatolika
Oh waphezulu Nokwahlulela nje ukuthi welula isandla sakho kwabampofu nabacebile!
Umuntu othanda intethelelo nomusa, ukukhanya kokomoya okukhanyisela izindlela zobumnyama obukhulu, iZwi lempilo nothando olujulile, Ukufundisa nobufakazi obusondla ngomkhuleko.
Wena owabhekana nokuhlukunyezwa okubi kakhulu nokuhlaziswa, Ukuthi ungcwele futhi umsulwa wamukele ngokuthobeka izijeziso ezimbi kakhulu, Wena oyinkosi yamakhosi, ophilayo futhi obusa phezu kwabo bonke ububi nobuso sonke isintu, wamukelekile ngaphandle kokububula noma ukuhlambalaza kakhulu Ukushaywa kabuhlungu, Futhi wanikela ngakho konke ukusindiswa kwethu, Vumela umkhuleko wethu kanye nesicelo sethu size kuwe.
Amademoni nabanakho ababale ngamandla omkhuleko wakho, Ukhuphule abantu abagulayo emibhedeni yabo, Uphulukise izimpumputhe kubumpumputhe babo, Ubuye nempilo kwabanochoko, Wanika impilo nesinkwa kulabo abakulandelayo.
Wandisile izinhlanzi nezinkwa ukuze uzinikeze isixuku, Wavula amanzi futhi wahamba kuwo, Wanika imini nobusuku, Ukuthula nobumbano, Wena Mahluleli wethu Olungileyo ngaphandle kokungabaza uhambisana nabantu bakho, Ngaphandle kwemikhawulo unika konke, Futhi usigcwalisa isethembiso sakho, Lapho kufika umuntu ozinikela kuwe, Awungcikiva noma ukhaphela, Awukhubeki noma ulimaze, Usifundisa ngemifanekiso, Ushiya ifa elingapheli emiBhalweni Engcwele, Ulalela umkhuleko wethu futhi usithanda.
Umkhuleko uhlala uyindlela yokukhulisa, ngaphezu kwezicelo zethu, izindumiso zethu nokubonga uNkulunkulu osinika thina namalungu omndeni wethu ukuvikela nsuku zonke zomhlaba.
Ngokwenza lowo mthandazo siyazi futhi sikholelwa ukuthi isivikelo saphezulu siphambi kwethu kukho konke esikwenzayo ngalolo suku.
ISonto lamaKhatholika linomfuziselo womkhuleko kwiJaji leJaji lasekuqaleni, kulesi sibonelo somkhuleko sibona ukuthi siqala ngokubona zonke izimfanelo zikaJesu Kristu bese senza isicelo futhi siphela ngokubonga ukwamukelwa okunikezwe, okwedlule njengesenzo sokukholwa sethemba ukuthi Isimangaliso sesivele senziwe.
Umkhuleko kumahluleli olungile wabantu
Izilo ezingihlaselayo, Izingonyama ezingibhongayo, Ububi bunqoba eceleni kwami, ngizwa ukwesaba nosizi. Angisakwazi ukuhamba, ngesaba ukungalungi,
Izitha zami ziyahlekisa, Zikholelwa ukuthi zinamandla, Futhi yize igwala lami livela, Kukhona uMuntu oPhezukonke, Ngubani ongisizayo.
Vuma umahluleli eze kimi, asheshe eze kimi, alahle konke okubi, Amanye amadoda angihlasele futhi angihlukumeze, Wohlulela nje woza, woza kimi ngokushesha.
Ngiyahlaba umkhosi futhi ngibheka ubukhona bakho empilweni yami, ngingumuntu obuthaka, ngikufuna futhi angikwazi ukukuthola, Woza, woza maJaji wami Othandekayo.
Kwangathi ukuthakatha nokubi, Ukuthi ukusebenzelana nemimoya nobunyoninco, Kwangathi udeveli nesoni, Gobisa ikhanda lakho, Suka eceleni kwami, Uhoxe ngokushesha, Umahluleli ake angisize, ngicela ukubuza.
Kuza ukuthula nokuzola, Amadoda asebedlulile ihlombe bedumisa igama lakho elingcwele, Ngiyabonga, ngikunikeza ijaji lami nje, Ngiyabonga ngokungapheli, Haleluya, Amen.
Lomkhuleko othize ukhona ngenxa yezinga lodlame olwenzeka ezikhathini zamuva, kunzima kakhulu ukwehla ngomgwaqo nganoma yiluphi usuku olunikeziwe futhi ungaboni imvelo egcwele amandla amabi.
Kungakho lo mthandazo ubaluleke kakhulu njengoba sicela iJaji eliLungile ukuthi lilethe ukuthula nokuzola enhliziyweni yomuntu ukuze udlame luphele ngale ndlela.
Kuphela inhliziyo enhle kaJesu Kristu engaguqula inhliziyo ibe yinhle futhi izifiso ezinhle zibe izibusiso.
Nd kungcono ukuqeda ukuhlukunyezwa nobudlova kunomthandazo ogcwele ukholo izinhloso ezinhle, ngaphandle kobugovu futhi okwenziwe ngomphefumulo.
Umkhuleko ungahlulela ukukhipha isiboshwa
INkosi ethandekayo uJesu. Wazalwa ukhululekile.
Umoya wakho onamandla onke ukhululekile, noma ngabe umzimba wakho wenyama ngokusobala awunjalo.
Lowo ongubukhona bakho baphezulu, uphakathi kwakho, uhlala ehamba nawe. Nginxusa ubukhona bomoya obukuwe futhi ngicela ukuthi ngikukhulule, leyo nkululeko ehambelana nakho konke okuphilayo ngokonembeza.
Mina ngingumnyango ovulekile wokuthi akekho umuntu ongasondela kimi nalowo mnyango okuholela ekuthuleni, othandweni lukaNkulunkulu nomakhelwane wakho, kokuhle nenjabulo yakho, uzovula kakhulu nangokusobala, manje nangoku Phakade.
Lesi sigwebo sisahlulela ngokuphelele ukukhulula isiboshwa unamandla kakhulu.
Ukuphila lesi sikhathi esibi nelungu lomndeni noma umngani ngokungangabazeki kungenye yezinto ezimbi kakhulu ongabhekana nazo.
Kulabo abaphucwa inkululeko yinqubo ebuhlungu lapho umthandazo omningi izikhathi eziningi okuyiwo kuphela onganikeza ukuthula nethemba.
IJaji Elilungile uJesu Kristu liyabuzwa ukuze izinqumo ezithathiwe maqondana nesigwebo ziphinde zibhekwe, ukuthi ukuqonda kuvulwe nokuthi kungasebenza ohlangothini luka ubulungiswa.
Ngendlela efanayo, isicelo singanwetshwa ukucela ukuthula okuncane nokubekezela, ukuzama ukwenza okushiwo yizwi likaNkulunkulu, sincengele umakhelwane wethu.
Umkhuleko wejaji elilungile ngamacala anzima
OkaNkulunkulu waphezulu nokwahlulela kwabahluleli abaphilayo nabafileyo, ilanga laphakade lobulungisa, okugcwele esiswini seNdlovukazi enguMariya impilo yohlu lomuntu.
Ijaji nje, umdali wezulu nomhlaba futhi wafela esiphambanweni ngenxa yothando lwami.
Wena, obusongwe ngendwangu wabekwa ethuneni owavusa kulo ngosuku lwesithathu, umnqobi ka ukufa nasesihogweni. Ijaji elilungile nelikaNkulunkulu, yizwa ukunxusa kwami, nilalele izicelo zami, nilalele izicelo zami futhi nilinikeze okuhle.
Izwi lakho elivelele lathulisa izivunguvungu, laphulukisa abagulayo futhi lavusa abafileyo abanjengoLazaru nendodana yomfelokazi kaNawomi.
Umbuso wezwi lakho wabaleka amademoni, wabangela ukuba ashiye izidumbu zabaphethwe, futhi wanikeza izimpumputhe, wakhuluma nesimungulu, wezwa izithulu futhi uthethelele izoni, ezinjengoMagdalene nomuntu okhubazekile kusukela echibini.
Uzenze ungabonakali ezitheni zakho, labo abebezobopha wena bawela phansi, kwathi lapho usuphela isiphambano, ama-orbs athuthumela ngenxa yokuqina kwakho okunamandla. Uvulele uPitrongo amatilongo wamkhipha kuwona ngaphandle kokuthi abonwe ngunogada kaHerode.
Ulondoloze uDimas futhi wamthethelela isiphingi.
Ngiyakuncenga, Mahluleli nje, ngikhulule kuzo zonke izitha zami, obonakalayo futhi ongabonakali: iSroud eNgcwele owangimbozwa ngayo iyangimboza, isithunzi sakho esingcwele siyangifihla, umgubuzelo owamboza amehlo akho uphuphuthekisa labo abangishushisayo nalabo abangifisayo okubi, unamehlo futhi ungangiboni ukuthi izinyawo zinakho futhi azingifinyeleli, izandla zingenayo futhi zingangilingi, izindlebe zingenayo futhi azingizwa, izilimi zingenangisola futhi izindebe zakho zizothula enkantolo lapho zizama ukungilimaza.
Hhawu, Jesu Kristu nje kanye neJaji Laphezulu!, Ngithokozise kuzo zonke izinhlobo zosizi nezinhlupheko, ukukhonkotha nokuzibophezela, futhi ungenze ngikucenge futhi ngidume umbuso wobukhosi bezwi lakho elinamandla nelingcwele likubize uzongisiza, amajele avuliwe, amaketanga futhi izibopho zaphukile, imijondolo nemigoqo iphuliwe, imimese igobile futhi zonke izikhali ezingamelana nami zishayisiwe futhi zenziwa zangasebenzi. Futhi amahhashi awangifikele, nezinhloli azingibheki, futhi azingitholi.
Igazi lakho liyangigeza, ingubo yakho iyangimboza, isandla sakho singibusise, amandla akho angifihle, isiphambano sakho singivikele futhi sibe yisihlangu sami empilweni nangesikhathi sokufa kwami.
O, umahluleli nje, Ndodana kaYise waPhakade, ukuthi kuYe noMoya oNgcwele unguNkulunkulu oyedwa weqiniso!
IZwi Laphezulu lenziwe umuntu!
Ngiyakuncenga ukuthi ungimboze ngengubo ye-Holy Holy ukuze ukhululeke kuzo zonke izingozi ukhazimulise igama lakho elingcwele.
Thandazela umthandazo wobuNkulunkulu nobulungiswa wamacala anzima ngokukholwa okukhulu!
UJesu Kristu, ngenkathi esemhlabeni, wayengufakazi oqondile walokho ingqondo yomuntu engakufaka, wakuzwa kusenyameni yakhe lapho enquma ukunikela ngokuphila kwakhe ngenxa yothando ngathi.
Kungakho akekho ongcono kunaye oqonda izinqubo ezinzima, owaziyo ukuthi sizizwa kanjani, ukuthi sicabangani futhi asiqondise ekwenzeni okulungile ukukwenza noma kungacaci kangako okwamanje.
Asikho isicelo esinzima esingaxazululwa kusuka emthandazweni onokholo oluningi, uNkulunkulu uhlala ezigcina izithembiso zakhe.
Ngingayisebenzisa nini imithandazo?
Ungathandaza umthandazo weJaji noma nini lapho ufuna.
Ayinaso isikhathi, umzuzu, usuku lwesonto noma uhlelo. Kufanele uthandaze lapho udinga futhi lapho unentando nokholo.
Umkhuleko kuSanta Martin Knight